OIML Factory - China OIML Manufacturers, na-eweta
Ọrụ dị arọ CAST-IRON M1 dị 100kg na 5000 n'arọ (ọdịdị akụkụ anọ)
Arọ ikike arọ OIML F2 akụkụ anọ udi, egbu maramara igwe anaghị agba nchara na chrome plated ígwè
Ezubere ike dị arọ nke Jiajia iji hụ na arụ ọrụ dị mma ma rụọ ọrụ nke ọma, na-eme ka ha bụrụ ezigbo ihe ngwọta maka usoro mmezi ugboro ugboro. A na-arụpụta ihe ndị ahụ dịka usoro OIML-R111 maka ihe onwunwe, ọnọdụ elu, njupụta, na ndọta, ihe ndị a bụ nhọrọ zuru oke maka ụlọ nyocha nyocha na National Institutes.
Investment casting akụkụ anọ igwe OIML F2 akụkụ anọ udi, egbu maramara igwe anaghị agba nchara
Akụkụ anọ na-enye ohere maka ịchekwa nchekwa ma dị na ụkpụrụ ọnụahịa nke 1 n'arọ, 2 n'arọ, 5 n'arọ, 10 n'arọ na 20 n'arọ, na-eju afọ maka njehie kacha mma nke OIML klas F1. Ikike a na-egbu maramara na-eme ka ndụ kwụsie ike n'ogologo ndụ ya niile. Ihe ndị a bụ azịza zuru oke maka ịsachasị ngwa na iji ụlọ dị ọcha na ụlọ ọrụ niile.
Akụkụ akụkụ anọ OIML M1 akụkụ anọ udi, akụkụ ukpụhọde uji eze, igba ígwè
A na-arụpụta ihe nkedo ígwè anyị dị na Nkwado Mba Nile OIML R111 gbasara ihe, njigide elu, njupụta na ndọta. Ihe mkpuchi abuo abuo na-eme ka elu di elu nke na-adighi adighi nma, olulu na onu di nkpa. Ibu ọ bụla nwere oghere nhazigharị.
Akụkụ akụkụ anọ OIML M1 akụkụ anọ udi, top ukpụhọde uji eze, igba ígwè
Akụkụ akụkụ anọ OIML M1 akụkụ anọ udi, egbu maramara igwe anaghị agba nchara
Akụkụ akụkụ anọ OIML F2 akụkụ anọ udi, egbu maramara igwe anaghị agba nchara
Mmezi arọ N'ihi Digital Akara, Shear Bead Ibu Ibu, Akwụkwọ Akara Asambodo, Mmezi arọ Set, Akara Calibration Weight, Mmezi Mass,